Programmer's Diary: ဘလော့ဂ် ဘာကြောင့်စရေးဖြစ်သလဲ
ဘလော့ဂ် ဘာကြောင့်စရေးဖြစ်သလဲ ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ သူငယ်ချင်းကိုဖြိုးက tag လုပ်ထားတာတော့ ကြာပါပြီ။ ဒါပေမယ့် မအားတာရယ် ရေးဖို့ စိတ်မပါတာရယ်ကြောင့် မရေးဖြစ်ခဲ့ဘူး။ အခုတော့ ဒီရက်ပိုင်း အလုပ်မှာ နည်းနည်း အလုပ်ပါးနေတာကြောင့် ရတဲ့အချိန်လေးကို အသုံးချပြီး ရေးဖို့ စိတ်ကူးရပါတယ်။
၂၀၀၅ ခုနှစ်တ၀ိုက်မှာ ဘလော့ဂ်ဆိုတဲ့အသံတွေ အတော်လေး နေရာယူ လာပါတယ်။ ကိုအာလူးရဲ့ ဘလော့ဂ်တို့ ကိုညီလင်းဆက်၊ ကိုမောင်လှတို့ရဲ့ ဘလော့ဂ်တွေကို ဆက်တိုက်ဆိုသလို ဖတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်တော့ ညီငယ်မောင်သန့်ဇင်နဲ့ ဝေဖြိုးကျော်တို့ရဲ့ ဘလော့ဂ်တွေကိုလည်း အမြဲလိုလို ဖတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဘလော့ဂ်တွေမှာ ကွန်မန့်တွေရေးကြ အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးကြတာကို တွေ့ပြီး သံလွင်အိပ်မက်အတွက် စကားဝိုင်းလေးတစ်ခု ဖန်တီးနိုင်ရင်ကောင်းမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးရပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ သံလွင်အိပ်မက်အဖွဲ့ဝင် အယ်ဒီတာတွေ အားလုံးဆီက သဘောတူညီမှုရယူပြီး ၂၀၀၅ ဒီဇင်ဘာ ၂ရက်နေ့မှာ သံလွင်အိပ်မက်ဘလော့ဂ်ကို ဖန်တီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ မြန်မာလိုရေးတဲ့ဘလော့ဂ်တွေ ပိုပိုများလာတာနဲ့အမျှ သံလွင်အိပ်မက်ဘလော့ဂ်ကို အင်္ဂလိပ်လိုချည်းပဲ မဟုတ်ဘဲ မြန်မာလိုပါ ရေးလို့ရအောင် ညီငယ်မောင်သန့်ဇင်ရဲ့ အကူအညီနဲ့ ပြုပြင်ခဲ့ပါတယ်။ IE (Internet Explorer) နဲ့ ကြည့်ရင် မြန်မာဖွန့် မရှိတဲ့ ကွန်ပျူတာတွေမှာပါ ဖတ်လို့ရအောင် EOT ထည့်ခြင်းကိုတော့ ၂၀၀၀ခုနှစ်ခန့်တုန်းက ဒုတိယနှစ် ကျောင်းသားဘ၀မှာ nypmm.com ၀က်ဘ်ဆိုက်ကို တာဝန်ယူခဲ့စဉ်က ထည့်သွင်းခဲ့ဖူးတဲ့ အတွေ့အကြုံနဲ့ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ သံလွင်အိပ်မက်ဘလော့ဂ် ကနေ ဖန်တီးလိုက်တဲ့ သံလွင်အိပ်မက်ရဲ့ စကားဝိုင်း ကဏ္ဍဟာလည်း အောင်မြင်မှု ရသင့်သလောက် ရခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ သူငယ်ချင်း နေနေနိုင်၊ သံလွင်အိပ်မက်အတွက် စာမူတွေ အမြဲပို့ပေးတတ်တဲ့ အစ်မနိုင်းနိုင်းစနေတို့ရဲ့ ဘလော့ဂ်တွေကို နေ့တိုင်းလိုလို ရောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၀၆ ဇူလိုင် ၂၇မှာတော့ Programmer’s Diary လို့ ရေးထားတဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ ဘလော့ဂ်ကလေးကို ဖန်တီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနာမည် ပေးဖြစ်ပုံကတော့ ကျွန်တော့်ကွန်ပျူတာထဲမှာ ကျောင်းတက်စဉ်ကာလတည်းက အခုထိ စမ်းသပ်ရေးထားတဲ့ ပရိုဂရမ်တွေ၊ ပရောဂျက်တွေအတော်များများကို သိမ်းထားတဲ့ ဖိုင်တွဲတစ်ခုရဲ့ နာမည်အတိုင်း ပေးခဲ့တာပါ။ ရေးခါစကတော့ ဟိုးအရင်က ရေးဖြစ်တဲ့ကဗျာတွေကိုပဲ တင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၀၆ နှစ်ကုန်ပိုင်းရောက်မှ ကျွန်မရဲ့ကဗျာဆရာလို့ ခေါ်တတ်တဲ့ ချစ်သူအတွက် “သူမရဲ့ ကဗျာဆရာ” လို့ နာမည်ထပ်ပေးပြီး ဘလော့ဂ်ကို အသေအချာစရေးဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော့်ဘလော့ဂ်မှာ နာမည်နှစ်ခုဖြစ်နေတာပါ။
ကိုယ်တိုင်ဘလော့ဂ်ရေးပြီးတဲ့နောက် စာအရေးကောင်းတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ကိုလည်း ဘလော့ဂ်တွေ ရေးကြဖို့ တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့ နည်းပညာ အကူအညီလည်း ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ .. အန္တရာယ်နယ်မြေက ကိုဇင်ကိုလတ် (ခေါ်) စည်သူ(သံလွင်)၊ လွတ်ကျခဲ့တဲ့မြို့တော်က မြို့စားကြီး ကိုနေဘုန်းလတ် (ခေါ်) နေမျိုး(သံလွင်)၊ ကိုငယ် (မန္တလေး) [အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ယခုဘလော့ဂ်ရေးသားခြင်း မရှိတော့ပါ]... စည်းအပြင်က ကိုဖြိုးတို့ပါ ဆက်တိုက်ဆိုသလို ရေးသားလာကြပြီး ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဘလော့ဂ်ရပ်ဝန်းလေး စည်ကားသိုက်မြိုက်ခဲ့ပါတော့တယ်။
ရေးသူ- ညီညီ(သံလွင်) ၊ ရေးသည့်အချိန်- 11:31 AM
I also haveablog and I want to add comment to other's blog in myanmar fonts. But I don't know how to change the font in comment section though i have already installed the font in my computer. Will u please help me?
August 26, 2007 2:08 AM